Kufuneka ukwazi phambi kokuba ethenga ukuba Hoverboard - Jomo Technology Co., Ltd
Kufuneka ukwazi phambi kokuba ethenga ukuba Hoverboard
Abanama-zobugcisa self balancing ubuchule, ezicuthiweyo kabini kunye gyroscope ezakhiwa-in sensor womxhuzulane, kulula kakhulu ukuba ukulawula, ukutshintsha nje somzimba wakho ubunzima intliziyo, scooter yakho iya eguquguqukayo udlulisele phambili, ngasemva, ekhohlo, ekunene, kwaye babuyele 360 idiploma a ndawo. Enye phawu ilungileyo le isithuthuthu nguwe ixhume ku Bluetooth nge app zeselula. Ukuba kunjalo, kufuneka ukuba ukhethe imveliso kakhulu ukuba akayi ufike ukuphoxa athetha wayo kuwe. Ngoku, awuna ukuba ukhathazeke ngokuphathelele ibhetri. Koowheel hoverboard battery baba ixesha elide kakhulu, ezifana K3 self balancing isithuthuthu, uhlobo ibhetri 18650 ukusebenza eliphezulu iiseli ibhetri, umlinganiselo ubomi 1500 mijikelo.
Andizange azisole ukuthenga Powerboard ngu Self Ukulinganisela 2 Wheel Electric Isithuthuthu nokuba kamsinya nje yaye ndivuya gqitha ukuba bayayimisela. I- Self Ukulinganisela Isithuthuthu K3 kunye Self-ezicuthiweyo kwiBhodi KOOWHEEL uye yonke eninzi igunya ukutsiba phezu naliphi ithambeka 18-degeee phandle phaya, kwaye iza kuvumela ukuba sifikelele kumaqondo ezintsha ngoko nangoko. Riding yaba mnandi, nangona ndaziva ngathi disco ekhwele nibone oku kodwa enye njenge abantwana yokudlala kunokuba njengobuchule yokuhamba. I-extra ukwayama umva okanye baye phambili, ephezulu isantya ehamba ngaso loo matshini.
Kuyinto elungileyo isigqibo bayo yonke iminyaka yobudala. Kusenokwenzeka ukuba ngendlela eyiyo-ekubhekiswa njengoko ngezithuthuthu 2 self-balancing ngasentla ke musa ukuqhathwa, oko nje yavele nje elungileyo. Koowheel K3 ezimbini wheel scooter yombane self-balancing iye ikhule ibe sisixhobo kuyimfuneko ukwenza iqela lezonyango ukuhambisa msinyane kunye ezaneleyo uluhlu namandla. Ngoko ke yintoni eyenza Koowheel Electric Isithuthuthu ukuze elithile? Nazo zonke iinkalo zalo esithethe ngayo nexabiso layo, kuba ngokuqinisekileyo i "hamba kakuhle ngoku uyibambe" isithuthuthu. Oku kunokuba enye into uya uyazibuza ngoku ukuba iKrismesi kunye kwiiholide sekudlule. Powerboard yi Hoverboard is ultimate scooter self-balancing enokuthi ibe mali yinto friendly unyuka kunye nokukhethwa kakhulu ukuba amava lokugqibela ilizwi ekhwele nayo. Na lyo line, ngencam ilandelayo, kukhethwa lowo kakuhle kufuneka ukubethwa ngumoya epakini ..
Yethu balance scooter yombane self usebenzisa gyroscope ukuba ukulawula ngengqiqo uzinzo. Bazilungiselela namandla motor ngamawele, entsha Koowheel scooter yombane igqalwa omnye phezulu zonke-yokubona "hoverboards" kwimarike ukuzuzwa ngesantya max ka 8MPH kunye degrees 20 emaqhineni. Segway yi singlehandedly inoxanduva popularization ingcamango ka-enamavili amabini, ukuzeyisa balancing, ibhetri-enikwe iimoto zombane.
ixesha Post: Jan-19-2018